Isifundo se-Izisekelo zobuHlobo noMphakathi
Buyini Ubudlelwano Bomphakathi futhi ungabusebenzisa kanjani ngempumelelo ukuthola ukwesekwa okudingayo ngabanye.
Indlela ongawukhomba kahle ngayo umphakathi wakho futhi uwufinyelele ngomyalezo abazophendula kuwo.
Maningi amathuluzi abalulekile ongawasebenzisa ukwenza imisebenzi yakho emihle yaziwe futhi yamukeleke kahle.
Ubudlelwano bomphakathi buhlinzeka ngezindlela zokuxhumana ngemibono yakho futhi uzenze zamukelwe—okufuneka ngekhono lapho usebenza nemibono emisha. Kuyindlela yokuthola ukusekelwa kwamaphrojekthi akho nababekhona.
Ngokuvamile kubhekwa njengendlela yokuthola ukwaziswa, ubudlelwano bomphakathi phambilini bebubekelwe imingcele ebukhali. Lokhu kwakungumkhuba owawunezinto ezithile ezibalulekile. Manje, ngenxa yokutholiwe okubalulekile kwi-Scientology, intuthuko yenze wonke umsebenzi waba wusizo kakhulu futhi waba nempumelelo.
Ukucolisiswa kuka L. Ron Hubbard kobudlelwano bomphakathi akugcini nje ngokubenza kubaluleke kunoma yiliphi iqembu nakunoma yimuphi umuntu, kepha kususa imikhawulo ebikade ikhona. Yize ubuchwepheshe obugcwele bubanzi, imigomo eyisisekelo ehlanganiswe lapha izoba wusizo olukhulu kunoma ngubani onenhloso ezuzisayo.
Incwajana Izisekelo zobuHlobo noMphakathi
Lapho sekuqediwe Isifundo se-Izisekelo zobuHlobo noMphakathi, uzothola isitifiketi nge-email.
“Ngizizwa ngibusisekile ngokuqeqeshwa engikuthole ngisebenzisa le ncwadi kwezobudlelwano nomphakathi. Ngikwazi ukuxhumana njengochwepheshe ezindabeni zobuchwepheshe.
“Isambulo (njengoba ngizosibiza kanjalo) ngomthetho wemininingwane eshiywe siye saba ngokoqobo kimi. Ngangivame ukuba nezinkinga zokuzwana nabangane bami. Kubonakala sengathi bebengazi okuningi, ikakhulukazi ngendlela engiziphatha ngayo. Ngamafuphi, babengakaze babe namaqiniso amaningi ngami.
“Bese kwavela ithuba ngaqokwa njengommeleli wekilasi ekolishi muva nje. Ungacabanga ukuthi usesigabeni esiphakathi sokuxazulula izingqinamba zabafundi ngokumelene nabaphathi.
“Bese kuba khona ithuluzi lokusondelana, iqiniso nokuxhumana. Leli ithuluzi lokuxhumana elibalulekile. Ngizamile ekusizeni engifunda nabo ukuba bacindezele abakufunayo kubaphathi. Ukuba ukuphela kwesixhumanisi phakathi kwabafundi nabaphathi, ngabaletha ekuqondeni ngokusebenzisa ubumbano, iqiniso nokuxhumana.
“Ngizizwa ngibalulekile, futhi ukungabi khona kwami okuncane kuyezwakala. Lokhu kimina kuyimpumelelo. ”
“Lezi zifundo zingikhombise indlela enhle yokuhlalisana nabantu nokudlulisa imibono.
“Izinyathelo zokwenza lokhu ziyasebenza, futhi ngiyayithanda indlela okuhle okuhlala kungaphansi ngayo ukuthola imibono Ngizomela ekusizeni engifunda nabo ukuthi bacindezele abakufunayo kubaphathi.
“Futhi ukuthi ubhekana kanjani namahemuhemu nenhlebo embi kuhle ukuze wazi ukuthi ungakusingatha kanjani lokhu. Ngizizwa ‘sengisesimweni’ sokubhekana namahemuhemu ngemva kwalesi sifundo, futhi bengikudinga ngempela lokhu, ngithola amandla ami esikhundleni sokuhoxa. ”